नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हामी पनि हिन्दू धर्मका पक्षपाती हौं तर गलत कुरा ज्यान जाला मानिदैन मानिदैन ! यस्ता लाखौं निर्दोश पशु हत्या रोक्नै पर्छ । यो धर्मको दुरुपयोग हो, कुसँस्कार हो, दानबता को पनि पराकास्ठ हो !
हामी पनि हिन्दू धर्मका पक्षपाती हौं तर गलत कुरा ज्यान जाला मानिदैन मानिदैन ! यस्ता लाखौं निर्दोश पशु हत्या रोक्नै पर्छ । यो धर्मको दुरुपयोग हो, कुसँस्कार हो, दानबता को पनि पराकास्ठ हो !
Posted by www.Nepalmother.com at 5:50 PM